Ahoana ny fandefasan'ny Harvard hetsika ara-panatanjahantena maherin'ny 300 isan-taona miaraka amin'ny mpiasa roa amin'ny fotoana feno | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Ahoana ny fandefasan'i Harvard mihoatra ny 300 fanatanjahan-tena isan-taona amin'ny mpiasa roa
Nosoratan'i: Imry Halevi
Talen'ny mpanampy amin'ny atleta, Multimedia and Production, ao amin'ny Oniversite Harvard
Ny iraka ampanaovinay ny fampisehoana tantara ara-panatanjahantena Harvard dia mihoatra ny tranga fampiasa amin'ny fomba nentim-paharazana rehefa mijery ny famokarana horonantsary marobe amin'ny fanatanjahan-tena mivantana. Ny fiainana mivantana amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena dia mizara tanjona mitovy amin'ny departemantan'ny serasera Harvard amin'ny ankapobeny. Ireo dia:
Lazao an'izao tontolo izao ny tantaran'i Harvard
Arovy ny tantaran'i Harvard amin'ny alàlan'ity tantara ity
Ny zava-misy ao amin'ny Harvard dia ny hoe mety hanana filoham-pirenena ho avy any Etazonia isika izay mifaninana amin'ny basikety, rano polo, manidina, na tennis. John F. Kennedy dia nilalao baolina kitra teto. Ny mpanao politika, mpitsara, tale, mpisehatra, mpamorona ary ny zon'olombelona dia mahazatra amin'ny alumni - ary mihoatra ny vitsy amin'izy ireo no nandray anjara tamin'ny atletisma Harvard.
Noho ity pedigree ity dia manana adidy amin'ny maha mpiambina ny tantara isika hanoratra amin'ny lalao sy fifaninanana betsaka araka izay tratra. Izany no antony anaovan'ny departemanta ahy amin'ny fampielezana ny 32 amin'ny lalao ara-panatanjahantena 42 I. Mamoaka ny filazam-baovao 300 isan-taona isika isan-taona manomboka amin'ny fanatanjahantena manaraka:
Basketball amin'ny vehivavy
Basketball an'ny lehilahy
Vehivavy Hockey Vehivavy
Soccer Soccer ny vehivavy
Soccer Soccer Men
Vehivavy rano Polo
Ny ranon'ny lehilahy Polo
Milomano sy antsitrika vehivavy
Milomano sy antsitrika ho an'ny lehilahy
Lalam-baravarana sy ny saha anatiny
Làlan-kaleha sy kianja anatiny an'ny lehilahy
Ny volon'ny lehilahy mavesatra
Ny volon'ny lehilahy dia maivana
Fencing ny lehilahy
Tenisy ny vehivavy
Fototry ny vehivavy
Na dia tsy fehezin'ny ara-bola aza isika amin'ity ezaka ity, dia tokony ho jerena tsara ny vidin-javatra. Mba hanaovana an'izany, miantehitra amin'ny teknolojia izay tsy "lafo" fotsiny isika fa kosa mampihena ny ahiahy amin'ny fihenan-drivotra, manamaivana ny fitakiana mpiasa, ary afaka mampiasa ny fotodrafitrasa any amin'ny campus izay midika izany - izany hoe mampihena ny fantsom-pifandraisana SDI ary tsy mitondra 55- kamiao OB.
Ny mpiasa ao amin'ity ezaka ity dia izaho sy ny talen'ny mpanampy ahy. Izahay ihany no mpiasa maharitra. Tsara vintana izahay manana interns telo miasa amin'ny fihodinan'ny 10 isam-bolana, ary mampiasa mpianatra sy ny diplaoma tato ho ato avy amin'ny oniversite sy oniversite hafa koa isika ao amin'ny faritra izay mitady traikefa azo ampiharina momba ny asa. Tsy misy mpampahalala vaovao na horonantsary fanaovan-gazety mihetsika i Harvard. Ny dikan'izany dia tsy azo ampiharina fa ny teknolojia rehetra ampiasainay dia tokony ho mora ampiasaina sy mora mampianatra.
Noho ireo rehetra ilaina ireo dia miantehitra amin'ny tsirairay isika NewTek vokatra ary, indrindra fa ny protocol NDI. Tsy mametraka teboka tena tsara, fa raha tsy NDI dia tsy ho tanteraka izany. Izahay dia mampiasa NDI amin'ny toerana rehetra ary mandritra ny fotoana rehetra.
Ny NDI dia mampiasa ny foto-drafitrasa misy ao amin'ny Harvard mba handefasana sy handraisana ireo horonantsary ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampitaovana ataontsika. Ary, satria protocol maimaim-poana ampiasaina, dia afaka mampiasa azy io na aiza na aiza, amin'ny haingam-pandeha ary am-pilaminana. Ny fanovana amin'ny toeran'ny fakantsary, amin'ny tambajotra, na amin'ny teknolojia ao amin'ny workflow dia tsy misy fiantraikany amin'ny fisian'ny loharanon-tsika.
Raha ny momba ny fivezivezena ara-batana, manana efitrano fifehezana roa isika. Ny efitrano fifehezana basikety dia manana TriCaster TC1 izay ampiasainay amin'ny famokarana fandaharana sy ny TriCaster 860 izay ampiasainay amin'ny efitrano fanaovana lahatsary. Satria miasa amin'ny tontolo tambajotra mitovy izahay, afaka mampiasa loharano horonan-tsarimihetsika miaraka amin'ny alàlan'ny fampivoarana streaming sy ny AV-in-trano. Ohatra, a NewTek 3Play 4800 rafitra famerenam-bola haingana dia misy ao anatin'ny TriCasters - manome famerenam-bidy eo no ho eo amin'ireo mpanafika miaraka amin'ny mpandraharaha tokana.
Izahay manana efitrano fanaraha-maso faharoa izay ampiasaina ho an'ny baolina kitra, lacrosse ary hockey. Ny arofanina dia mitovy amin'ny fampiasana ny TriCaster 8000 ho an'ny fandefasana azy ary ny TriCaster 460 ho an'ny tabilao horonantsary. Izahay roa koa NewTek Hijery 3Play 4800 ao amin'io efitrano io, ahafahantsika mamokatra fandaharana roa tsy miankina miaraka amin'izany.
Ary raha ireo efitrano fanaraha-maso ireo dia tendren'ny fanatanjahantena vitsivitsy izay mifanakaiky lavitra, dia azo ampiasaina ho an'ny fanatanjahantena rehetra mifandraika amin'ny tambajotra. Ny fampiasana NDI dia midika fa afaka mifindra / mivantana amin'ny efitrano fifehezana isika - na aiza na aiza misy ny fanatanjahan-tena.
Mampiasa fakantsary JVC manerana ny tabilao izahay - samy fakan-tsary miaraka amin'ny PTZ. Raha mila manome feed avy amin'ny toerana tsy manana fibre na SDI isika, dia mampiasa izahay NewTek Mampifandray ireo mpikova niovaovan'ny Spark NDI, izay mitondra ny sangan'asa amin'ny tambajotra.
Ary farany, mampiasa TriCaster Mini izahay dia mpanampy mpanohana. Ny fananana izany ho an'ny tahiry dia manome fahafahampo bebe kokoa satria afaka mitondra azy any amin'ny toerana iray any an-toerana isika ary mahazo mihazakazaka ho toy ny habaka NDI, na hanodina / hanoro ny sakafo avy amin'ny Mini Mini.
Ny vokatr'izany dia miharihary - avy amin'ny fomba fiasa azo ampiharina - raha tsy vita ny vokatra. Mahavita mampiofana mpiasa vaovao haingana isika ary mbola miantoka ny fandefasana matihanina isan'andro. Henonay mpankafy mandritra ny fotoana rehetra hoe sao dia mankasitraka ny kalitaon'ilay vokatra izy ireo - na football izany na fencing.
Ankoatr'izay, manatanteraka ny iraka ataontsika mirakitra ny tantaran'ny Harvard isika ary mizara ny hafatry ny atleta ho enti-manandanja izao tontolo izao. Ny sekoly dia mijery ny vokatra trosa amin'ny tetibola omena antsika ary fantatr'izy ireo fa nahavita zavatra nahagaga.
Ary tsy misy azo tanterahina raha tsy misy ny NewTek vahaolana novokarin'ny NDI.
fampitana injeniera fampitana Engineering Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor NewTek Telo sy zana-tsipìka TVU Networks Video injeniera 2019-10-25
Previous: "Tsy hitombo ny fahanterana izy ireo" Mpandray anarana avy amin'ny 2019 HPA Awards mpitsara ho an'ny famoronana sy ny fanavaozana
Next: Manampahaizana momba ny fahasalamana ara-tsaina 1 (Fahasalamana ara-tsaina) - Hood River, Oregon